ငါပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိ | Martech Zone
တနင်္လာနေ့, နိုဝင်ဘာလ 16, 2009 တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 3, 2013 Douglas Karr
ငါမာနထောင်လွှားသောအသံကိုငါသိ၏။ ငါအဲဒီလိုမဆိုလိုပါ ငါအလုပ်လုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာပြိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပဲငါကဲ့ရဲ့တာပဲ။ ငါအမြဲရှိတယ် မင်းကိုနောက်ကွယ်မှာမကြည့်နိုင်ဘူး၊ အမြန်ဆုံးပြေးနိုင်မယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ခါကငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ ငါကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ကုမ္ပဏီများလေဖြတ်ယုံကြည်ပါတယ်။
ငါထောက်ခံတာမဟုတ်ပါဘူး လျစ်လျူရှု သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှု…ကုမ္ပဏီတိုင်းသည်သူတို့စားပွဲသို့ယူဆောင်လာသည့်အားသာချက်များကိုနားလည်သင့်သည်။ သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာအားသာချက်များထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ထိုအားသာချက်များနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ / မရှိနှင့်ညီသည် ဖောက်သည်၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအစမှယခုထိကြီးထွားလာနေပြီးပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်အကိုင်တိုင်းကိုယူပြီးနေနိုင်ခဲ့သည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်တော့အဲဒါဟာမမှန်ကန်တာပါပဲ။ အဲ့ဒီပရောဂျက်အတော်များများကိုကျွန်တော်ရည်ညွှန်းနိုင်တယ်။ ဖောက်သည်တွေကလည်းပျော်ရွှင်ချင်ကြလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်၏အဓိကအာရုံစိုက်မှုမှာကြီးမားသောအေဂျင်စီများ၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများနှင့်မိတ်ဖက်ပြုမှုများပြုလုပ်ရန်နှင့်ဖောက်သည်ကြီးများနှင့်အဆက်အသွယ်တိုးပွားစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ပတ်မှာကောင်းတဲ့အလားအလာနှစ်ခုကိုငါရည်ညွှန်းခဲ့တယ် ယှဉ်ပြိုင်မှု။ လုပ်သင့်တာမှန်ပါတယ် ဒီဆက်သွယ်မှုတွေကိုသူတို့ထိုက်သင့်တဲ့ဂရုစိုက်မှုနဲ့မပေးနိုင်ဘူး၊ သူတို့အောင်မြင်ဖို့သေချာတဲ့အရင်းအမြစ်တွေမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်ငါ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုငါဘာကြောင့်စွန့်စားရတာလဲ။
ဒီနေရာမှာ Indianapolis မှာအရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့လူအုပ်ကြီးရှိတယ်၊ ငါပေးတဲ့အလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုမျိုး။ ကုမ္ပဏီများကြိုက်သည် အတိအကျ, ညာဘက်အပြန်အလှန်, အကျဉ်းချုပ်နှင့် ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီများတွင်ကျွန်ုပ်ပေးနိုင်သောထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများရှိသည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ သူတို့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဖောက်သည်အထောက်အပံ့နဲ့ငါ့မှာမရှိတဲ့အရင်းအမြစ်တွေရှိတယ်။ ဒါကဖောက်သည်အတွက်ပိုကောင်းတယ်
ဆိုရှယ်မီဒီယာအရမြို့ထဲမှာငါတို့ထဲကအတော်များများရှိတယ် ... ငါယုံကြည်တာအားလုံးကငါ့သူငယ်ချင်းတွေပါ။ မြို့တွင်းရှိကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းကြီးအချို့သို့ကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီသည်မိမိတို့၏ရှုထောင့်ကိုစားပွဲသို့ယူဆောင်လာကြလိမ့်မည်။ ငါကဒီအဆင့်မှာသူတို့နဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့စိတ်မဝင်စားဘူး။ တနည်းကား, ငါကုမ္ပဏီရရှိမည်ကိုပိုမိုစိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ် မှန်သော အရင်းအမြစ်။ သူတို့ကိုငါရည်ညွှန်းပြီးအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့အားလုံးအနိုင်ရလိမ့်မယ်။ သူတို့ကိုငါရည်ညွှန်းတဲ့အတွက်အရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကစီးပွားရေးဖြစ်လာတယ်၊ နောက်အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုလည်းပထမဆုံးခေါ်ယူလာလိမ့်မယ်။
မကြာသေးမီက (ကြီးမားသော) ဒေသခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကကျွန်ုပ်အား၎င်းတို့အားအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုအချို့ပေးအပ်ရန်ဖိအားပေးမှုများပေးခဲ့သည်။ သူတို့ကိုငါနဲ့အတူအရင်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဆီကိုပဲရိုးရိုးလေးပြန်ပြောခဲ့တယ်။ အဲဒီပြန်ပစ်ခတ်မှုခံရတဲ့အခါသူတို့ကျွန်တော့်ဆီပြန်လာပြီးကျွန်တော်စိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတာသူတို့သိစေချင်တယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူမြို့တွင်အေဂျင်စီအနည်းငယ်ရှိပြီးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း (သို့) ဆိုရှယ်မီဒီယာကျွမ်းကျင်မှုကိုတီထွင်သူများကိုဂုဏ်ယူစွာဝတ်ဆင်ကြသည်။ သူတို့ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းမရှိသကဲ့သို့၎င်းနယ်ပယ်ရှိဖောက်သည်များနှင့်လည်းမည်သည့်ရလဒ်မျှမရရှိခဲ့ကြသော်လည်းထို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည့်ကုမ္ပဏီများအပေါ် ဆက်လက်၍ လုယူနေကြသည်။ သူတို့ကအခွင့်အရေးယူသူတွေ၊ ၀ န်ဆောင်မှုမှန်သမျှကိုပေးပြီးဘယ်သူ့ကိုမှမေးစရာမရှိပါဘူး။ သူတို့လုပ်နေတာတွေကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး၊ သူတို့တတ်နိုင်သလောက်မကြာခဏဆန့်ကျင်ပြောဆိုတယ်။
သင်တစ် ဦး ရှာနေလျှင် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် optimization ရှာဖွေမှုအချို့ကိုလုပ်ပါ။ မည်သူသည်မည်သူရှာဖွေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အဲဒါလွယ်ပါတယ် သင်တစ် ဦး ရှာနေလျှင် လူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူဒေသတွင်းဖြစ်ရပ်များကိုတက်ရောက်ပါ၊ မည်သူအောင်မြင်သောဒေသဆိုင်ရာကွန်ယက်ကိုစတင်တည်ထောင်သည်ကိုစစ်ဆေးပါ။ ဘယ်သူ့မှာကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်၊ ဘယ်သူကမသိဘူးဆိုတာအရမ်းရှင်းလာလိမ့်မယ်။ အခွင့်အရေးယူသူများသည်မျက်ရည်များစီးကျလာကြသည်။
ငါပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်မယုံကြဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အလုပ်မှာကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီ၏နာကျင်မှုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ငါမသင့်တော်ဘူးဆိုရင်ငါဆက်လုပ်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေကြီးထွားလာတယ်၊ ငါပျော်မွေ့တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ကိုင်ဖို့အချိန်ပိုယူလာတယ်၊ ကျွန်မရဲ့ဖောက်သည်တွေကသူတို့လိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေကိုတွေ့မြင်နေရတယ်၊ ကျွန်မကျေနပ်မိတယ်၊
သင်ဘယ်လိုထင်ပါလဲ? သင် ... လုပ်ပါသလား အမှန် ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိလား
ဂူဂဲလ်ကို Web ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ရန်တကယ်ပဲကြိုးစားနေပါသလား။
Flat-Head Squirrels နှင့် Kamikazes
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 48
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 17
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရငါ Matt ပြီးပြီ။ ငါကိုင်တွယ်ရန်ကျန်ကြွင်းအချို့ရှိသေး၏။ 🙂
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 53
"မင်းကိုနောက်ကွယ်မှာမကြည့်နိုင်ဘူး၊ အမြန်ဆုံးပြေးနိုင်မယ်လို့တစ်ယောက်ယောက်ကတစ်ခါကငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်။ "
ငါလုံးဝသဘောတူတယ် မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်တို့တွင်အလားတူ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသောကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုရန်စိတ် ၀ င်စားဟန်ရှိသည်။ သူတို့ကတော်တော်လေးပီပီပြင်ပြင်ဆန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရည်ညွှန်းတဲ့သူရဲ့နာမည်ပေးဖို့အထိတောင်သွားတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကငါတို့ website မှာပုံစံတွေကိုဖြည့်စွက်တယ်၊ voicemail မက်ဆေ့ခ်ျတွေကိုခေါ်တယ်၊ ထွက်ခွာတယ်၊ ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့နေတုန်းကျွန်တော်တို့ဟာအလားအလာရှိတဲ့ဖောက်သည်တွေနဲ့စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အချိန်ကိုပိုကောင်းတဲ့အလားအလာများနှင့်စကားပြောခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းအတွက်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။
ကြွင်းသောအရာသည်ငါသည်လည်းသဘောတူသည်။ သင်၏အရည်အချင်းကိုသိပါ။ စွမ်းရည်များနှင့်အရင်းအမြစ်များ။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသူများနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသောဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ပါ။ ထို့နောက်လူတိုင်းနိုင်ကြသည်။
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 05
အလွ post ကို, Doug ။ ငါလုံးလုံးသဘောတူတယ်
စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာမူလက်တင်ဘာသာပြန်ခြင်း၏ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်“ အားလုံး၏ကောင်းကျိုးအတွက်အတူတကွကြိုးပမ်းရန်” ဖြစ်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အောင်မြင်သူများနှင့်အရှုံးသမားများ၏အယူအဆကို ၁၆ ရာစုတွင်ပြင်သစ်တို့ကစတင်ခဲ့သည်။ အဲဖားတွေကိုချန်ထားပါ။
17:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 18
17:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 5, 24
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုသူတို့၏ SEO ရည်မှန်းချက်များနှင့်ငှားရမ်းထားသူများကအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုများကိုရယူရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုသင်လုံးဝသဘောတူသည်။ အကြီးအကဲများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
17:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 6, 49
ငါဒီထက်ပိုပြီးသဘောမတူနိုင်ဘူး ပြိုင်ဘက်များကိုအာရုံစိုက်ရန်နှင့်စိတ်ပူရန်ကုန်ဆုံးရန်အချိန်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ အထူးသဖြင့်လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသောလူမှုမီဒီယာနှင့် SEO ကဲ့သို့သောစျေးကွက်များတွင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်နေရာများစွာရှိသည်။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များသည်သင်၏နေ့လည်စာကိုစားနေသောကြောင့်ထက်သင်သည်ဖောက်သည်များနှင့်အဆင်ပြေချောမွေ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်သေဆုံးရန်ပိုများသည် ။
17:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 03
Doug - မင်းရဲ့ချဉ်းကပ်ပုံကိုမင်းကြိုက်တယ်။ ရည်ညွှန်းရည်ညွှန်းမှုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခြင်းသည်ဖောက်သည်များပျော်ရွှင်စွာကုန်ဆုံးသွားသောအခါသင့်အား၎င်းတို့အားပျော်ရွှင်စေကြောင်း၊ လွှဲပြောင်းမှုနှင့်သာသက်ဆိုင်နေလျှင်ပင်သူတို့အမြဲသတိရနေလိမ့်မည်။ လမ်းလျှောက်တာကထိခိုက်တာလောက်မကောင်းဘူးလား။
ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအများစုသည် ၄ ​​င်းတို့သည်သင်မပေးနိုင်သည့်သို့မဟုတ်မပေးသင့်သည့်အရာတစ်ခုနှင့်၎င်းအားရိုးသားစွာပြောဆိုခြင်းကိုသူတို့သိနေခြင်းအားဖြင့်သမာဓိရှိမှုဘက်မှတန်ဖိုးထားလေ့ရှိသည်။ အကယ်၍ ကုမ္ပဏီသည်၎င်းကိုတန်ဖိုးမထားပဲတစ်ဒေါ်လာချွေတာရန်သာစိတ် ၀ င်စားပါက၎င်းတို့ကိုဖောက်သည်တစ်ယောက်အတွက်သင်အလိုမရှိပါ။ ပြောရန်လွယ်ကူပြီးခက်ခဲသောလက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေတွင်လိုက်နာရန်ခက်ခဲသော်လည်းစကားလုံးများဖြင့်အသက်ရှင်ရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးစကားလုံးဖြင့်ပြောရန်လိုသည်။
17:2009 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 11, 20
Doug၊ သင်သည်သင်၏တန်ဖိုးရှိအချိန်ကိုပြိုင်ဆိုင်မှုပြုလုပ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ပူမိသောအခါသင်၏ယုံကြည်ချက်သည် (၁) ပျင်း။ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း (သို့) (၂) သင်၏လမ်းကြောင်းမည်သို့ရှိသင့်သည်ကိုသင်မသိပါ။ တိုးတက်ခြင်းနှင့်သင်၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမတုံ့ပြန်ခြင်းသည်အောင်မြင်ခြင်း၏အနှစ်သာရဖြစ်သည်။
21:2009 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 33
Doug - ဂရိတ် post! ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအစောပိုင်းကာလ၌ကုမ္ပဏီအတွင်း၌စစ်ပွဲ၊ စစ်ပွဲ၊ နည်းဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာစသည်ဖြင့်များစွာသောစစ်ဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများကိုမှတ်မိသည်။ ကျမတို့ကတခြားကုမ္ပဏီတွေလုပ်နေတာကိုအရမ်းစိုးရိမ်တယ်။ ငါ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူငါအခြားယောက်ျားတွေစိုးရိမ်ပူပန်လို့မရပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ရန်အာရုံစိုက်ရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည် "အခွင့်အလမ်းများ" မှဝေးရာသို့ထွက်ခွာသွားကြသည်။ အခြားအချိန်များကသူတို့ကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး ထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ငါစားပွဲသို့ယူဆောင်လာသည့်တန်ဖိုးကိုအာရုံစိုက်နေသရွေ့ကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်သွားစရာများစွာရှိသည်။
5:2012 pm မှာဇွန် 1, 51
ငါပထမ ဦး ဆုံးငါခြွင်းချက်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေး၏ကြီးမားသောပန်ကာဖြစ်၏။ ငါစပ်စုတယ်
သူတို့နှင့်မကိုက်ညီသောဖောက်သည်တစ် ဦး ကိုတွေ့ရသည်။ သင်သူတို့ထံမှများစွာသောရည်ညွှန်း get ပါသလား
သို့မဟုတ် ၀ ယ်သူအားအမှန်တကယ်ကူညီခြင်း၏ကောင်းမွန်သောကံကြမ္မာကိုသင်ယုံကြည်သလား။